Vaovao - Xieyanshi Abrasives Niara-niasa tamin'ny Comac!
Miarahaba anao amin'ity fiaraha-miasa ity. Taorian'ny fifampiraharahana sy fanaraha-maso lava dia nandalo ny COMAC'S i Shanghai Xieyanshi Abrasives (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) mandinika ary manamarina fa lasa mpamatsy azo antoka. Minoa ny XIEYANSHI fa hanana fiaraha-miasa lalindalina kokoa amin'izy ireo ao amin'ny abrasives-A720T, B322, L911 sns.
Andriamatoa Chen, filohan'ny abrasives Xieyanshi, dia nanao sonia ny fifanarahana tamin'i COMAC tao amin'ny CIIE (tHE 3RD China International Import Expo)
(Andriamatoa Chen, mipetraka eo akaikin'ilay vehivavy miloko mavokely.)
Ny Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) dia miasa ho toy ny fiara lehibe amin'ny fampiharana programa lehibe momba ny fiaramanidina mpandeha ao Shina. Izy io koa dia manana adidy amin'ny drafitra ankapobeny amin'ny famolavolana ny vatan'ny vatan-kazo sy ny programa jet an'ny faritra ary hahatsapa ny fanatontosana ny fiaramanidina sivily any Shina. COMAC dia mirotsaka amin'ny fikarohana, fanamboarana ary sidina sidina fiaramanidina sivily sy vokatra mifandraika amin'izany, ary koa marketing, servisy, fanofana ary fiasan'ny fiaramanidina sivily.
Shanghai xieyanshi Abraisves Co Ltd (XYS) dia mpanamboatra matihanina amin'ny abrasives, ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny Automotive, Airplane, Woodworking ... ny kalitao sy ny serivisy no laharam-pahamehana hatrany.
Tongasoa izay misy fangatahana na fangatahana santionany avy aminao. Aza misalasala mifandray aminay raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny vokatray.